Wararka Maanta - Dowladda Ethiopia oo ka jawaabtay tallaabo ay qaaday Masar - Somger
Addis Ababa (Somger - Wararka Maanta)
Dowladda Ethiopia uma muuqato wax sabab ah oo ay dib ugu dhigto buuxinta biyo-xireenka muranka uu ka taagan yahay ee webiga Nile, inkasta oo ay jiraan digniino ka imanaya Masar oo ah in tallaabada noocaas ah ay xasilooni darreyn karto gobolka, sida lagu sheegay warqad ay wasaraadda arrimaha dibedda Ethiopia u dirtay Golaha Ammaanka QM.
Biyo-xireenka dib-u-curashada weyn ayaa ahaa isha xiisad u dhaxeysay labada dal tan iyo markii ay Ethiopia ay billowday dhismaha mashruucan, 2011—kii.
Addis Ababa ayaa sheegtay in biyo-xireenka uu muhiim u yahay dhaqaalaheeda, halka Qaahira ay ka cabsi qabto inuu waxyeeleyn karo webiga ay ka hesho inta badan biyaheeda.
Wada-hadallo dhacay horraantii sanadkan oo u dhaxeeyay labada dal iyo Sudan – oo ah dal kale oo webiga uu maro – ayaa ku guul-darreystay in wax heshiis ah lagu gaaro.
Wararka maanta waxaa intaa ku siii darayaaaa in bishii April, ra’iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa soo jeediyey in lagu dhaqaaqo “marxallada koowaad ee buuxinta” taasi oo muddo laba sano gudaheed ah ku shubeysa keydka biyo-xireenka biyo dhan illaa 18.4 bilyan oo cubic meter.
“Tani waa xaalad suurta-gal ay tahay inay halis muuqata ku noqoto nabadda iyo amniga gobolka oo dhan,” ayuu yiri.
Ethiopia ma haysato waajib sharci ah oo ay tahay inay Masar fasax uga raadsato buuxinta biyo-xireenka,” ayuu yiri Gedu.
Dowladda Ethiopia waxay saameyso dadaallo aan caadi ahayn oo ay ku tix-gelineyso dalabyada aan dhammaadka lahayn iyo dhaqanka aan la saadaalin karin ee Masar.
Ha ahaatee, dowladda Ethiopia ayaa ka baaqatay wareeggii ugu dambeeyey wada-hadallada, waxayna beenisay in wax heshiis ah lagu gaaray.
Inkasta oo warqadda Masar ee Golaha Ammaanka ay kasii dartay xiisadda, haddana suurta-galnimada dagaal dhex-mara labada dal oo ka dhasha biyo-xireenka ayaan “weli muuqaan”, sida uu sheegay William Davidson oo ka tirsan hay’adda xasaradaha caalamiga ah ee International Crisis Group (ICG).
“Waxaan fileynaa in xaaladda ay kasii darto diblomaasiyad ahaan, iyo haddalo kulul oo la is-weydaarsado. Hase yeeshee xal laga wada-xaajooday oo arrintan loo helo waa mid u wanaagsan dhinac kasta, waxaana weli jira suurta-galnimada arrintaas,” ayuu yiri Davidson.
Hadaba wixii ku soo kardho xaaladaha Masar iyo Ethiopia waxaan kuugu soo gubin doonaaa wararka maanta ee Somger.